बाबुको बिडो थाम्दै १२ वर्षे अमित – Pokhara Voice
बाबुको बिडो थाम्दै १२ वर्षे अमित
By Ghanashyam Lamichhane	 On ४ माघ २०७६, शनिबार १३:१३
पोखरा भ्वाईस, माघ ४
नेपाली पुरानो अन्धविश्वास अनुसार, दमाईहरूको पञ्चैबाजा नबजाई ल्याइएकी दुलही र भित्रने घरको रवाफ समाजमै पहिचान योग्य हुन्छ । विवाह पछिका दिनमा पनि जोरका जोर गर्दुवा (विवाहमा केटि पक्षकाले केटा पक्षकालाई दिईने गाग्री ताउला र अन्य सामान) र कती जोर दमाई वाजा लगरे भित्रायो भन्ने कुरामा ठुलै वहस हुने गर्छ । चिया पसलमा केटा पक्षका पुरुष र पँधेरोत तथा मेला पातामा केटा पक्षकै महिलाहरुमा ठुलो प्रतिष्ठाको कुरा वन्थ्यो जोर गर्दुवा र जोर वाजा ।
परापूर्व कालदेखि पञ्चैबाजा नेपाली पहाडी समाजसँग जोडिंदै आएको पाइन्छ । मंगलवाद्यका रूपमा दमाई जातिले विवाह, व्रतबन्ध, उत्सव, रोपाइँ, पूजा–पञ्चबलि आदिमा पञ्चैबाजा बजाउँदै आएका हुन् जुन आज पनि उत्तिकै अपरिहार्य रहेको पाईन्छ । पञ्चैवाजामा सहनै, ढोलकी, झ्याली, दमाहा र ट्याम्को पर्दछन् ।
पोखराका महानगर पालिका १८ स्थाई घर भएका अमित परियार १२ वषर््ाका भए । उनि त्यहिको शुक्रराज वलभद्र माध्यामिक विद्यालयको कक्षा ५ मा पढ्छन् । फुटु फुटु हिड्ने र खेल्ने उमेरका उनि पुख्यौली वाजा संरक्षण गर्न भन्दै हिडिरन्छन् । पोखरामा जारी व्यापार मेलामा उनि पञ्चेबाजा मध्यको ढोलकी भिरेर नेपाली पोशाकमा निकै ठाटका साथ देखा परे । उनको एउटा फोटो खिचौन भन्ने वित्तिकै उनिसँगै भएका अन्य समुहका वृद्ध सदस्यहरुले केहि मागेको आशयमा हातको पारले भने–“फोटो खिचेपछि एसो केहि खाजा आउला नी है वावु ?” उनका हजुरवुवा उमेरकाले उसो भनिरहदा आडैमा रहेका अमितले रिसाएको पारमा भने–“सर मेरो खिच्नुस् पैसा पर्दैन ।”
अधिल्ला पुस्ताले आफ्नो पेशालाई मागी खाने भाडो बनाएकोमा उनि निकै चिन्तीत छन् । उनि भन्छन्–“हामीले हाम्रो संस्कृतीको संरक्षण गर्न सकेनौ, हाम्रो पहिचान हाम्रा वा हजुरवाहरुले एक गीलास सक्सीमा वेचे ।” उनको यो भनाईलाई पुष्टी गर्दै पछिल्लो समयमा नौमती वाजा अव मगर वाजाका रुपमा पनि परिवर्तन भएको पाईन्छ कास्कीमा । मगर समुदायका मान्छेहरुले व्यवसायीक रुपमा विवाह व्रतवन्ध र अन्य शुभ कार्यहरुमा तीनै पञ्चैवाजा÷नौमतीवाजा वजाउदै आएका छन् ।
स्कुलमा शिक्षकले सिकाएको शैलिमा उनि भन्छन्–“ रक्सी खाएर वाजा वजाउनु हुदैन, रक्सीले हाम्रो स्वास्थ्यलाई असर गर्छ त्यसैले अनुशासनमा रहनु पर्छ ।” सानैमा वावुसँग रमाईलोको लागि विवाहमा पछि लागेर जादा अनि गएका वाजा वजाउनेहरु रक्सीले वजाउनै नसक्ने भए पछि तीनै वाजा वोक्दा वोक्दै बजाउन सिकेको उनको भनाई छ । आँफु दुई कक्षामा पढ्दा देखी नियमित रुपमा स्कुल छुट्टि भएको समयमा वाजा वजाउन हिड्ने गरेको उनको भनाई छ । उनि भन्छन्–“ म तीन वर्ष भयो नियमित रुपमा वाजा वजाउन हिडेको, वाजा वजाउने काम सँगै आवस्यक परेको वेला सवै भन्दा राम्रो नाच्न पनि सक्छु, ५÷६ जनालाई त म थकाईदिन्छु ।”
सानैमा आफु भन्दा ठुलो वाजा जनाउँदा थकाई लाग्दैन ? उनि भन्छन्–“ थकाई त लाग्छ नी तर पनि जिम्मेवारी लिए पछि काम गर्नु पर्दैन र ?”
वावुले बजाएका सवै वाजा उनलाई वजाउन आँउछ रे अमितलाई । दमाह, ट्याम्को, ढोलकी र झ्याली उनले वजाउँछन् । यत्तिका बाजा कसरी वजाउन जानेको त ? उनि भन्छन्–“वाबुको बिँडो धान्नु परेन । ”
वाजा वजाउनुको अर्थ थप्दै भन्छन् उनि शुभ विवाह आँफैमा शुभ हो हामीले संगीतको माध्यमवाट त्यसमा झन् शुभ वनाउने हो । हामीले शुभ कार्यलाई राम्रो वनाउने हो तर पनि हामीलाई हाम्रो पेशाका आधारमा गरिने भेदभाव भने कत्ति मन पर्दैन । विवाहमा वजाईने सवै खालका धुनमा उनी पोख्त रहेको पनि उनले जानकारी दिए । उनले भने–“यो हाम्रो संस्कृती हो हामीले यसको संरक्षण गर्नु पर्छ ।